समृद्धिका लागि सिक्नुपर्ने पाठ – nayakalam
समृद्धिका लागि सिक्नुपर्ने पाठ
२०७६, बैशाख २३ सोमबार | नयाँ कलम
लगानी बोर्डको समन्वयमा नेपाल सरकारले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न हालै लगानी सम्मेलन गर्‍यो। सम्मेलनमा ४० मुलुकका करिब ७५० जना विदेशी र झन्डै त्यत्तिकै संख्यामा स्वदेशी लगानीकर्ताको उपस्थिति रह्यो। प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको लगानी बोर्डले सम्मेलनलाई लक्षित गरी तयार पारिएका ७७ वटा परियोजना लगानीकर्तासमक्ष प्रस्तुत गरेको थियो।
दुईदिने सम्मेलनको अन्तिम दिन करिब १६ वटा समझदारीपत्र र सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुका साथै प्रस्तुत गरिएका परियोजनामध्ये करिब १७ वटामा निवेदन परेका थिए। सम्मेलनले नेपाल विदेशी लगानीका लागि उपयुक्त गन्तव्य हुन सक्छ भन्ने सरकारको आह्वानलाई विदेशी लगानीकर्तामाझ सशक्त ढंगले प्रस्तुत गर्न सफल भयो। समष्टिगत रूपमा यसपालिको लगानी सम्मेलन विदेशी लगानी भित्र्याउन सफल मान्नुपर्छ।
आलेखको उद्देश्य विकासशील र विकसित मुलुकले यस्ता लगानी सम्मेलन गर्नुको मुख्य उद्देश्य भने आफ्नो मुलुकलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउन वा समृद्धि भइरहने उपायको खोजी हो। हाम्रो जस्तो वा हाम्रोभन्दा कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकले समृद्धिको खोजीमा कुन यस्तो कार्य गरे जसले उनीहरूलाई छोटो समयमै सम्पन्नता हासिल गर्न सफल बनायो ? पूर्वी युरोप र पश्चिम एसिया महाद्वीप जोड्ने करिब ४५ लाख हाराहारीको जनसंख्या भएको पूर्वी युरोपेली मुलुक जर्जिया सन् १९९१ मा सोभियत संघबाट छुट्टिएर बनेको एक सानो स्वतन्त्र मुलुक हो।
स्वतन्त्र मुलुक बनेपश्चात् एक दशकसम्म आन्तरिक द्वन्द्वमा रुमलिएर आर्थिक र राजनीतिक रूपमा झन् जरजर बन्यो। सन् २००३ देखि भने जर्जियाले राज्यका प्रशासनिक तथा निर्वाचित निकाय बलियो बनाउने संकल्प साथ सरकारी निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा सुधार गर्न थाल्यो। सन् २००८ मा रुसले पुन आक्रमण गरेसँगै जर्जिया पुनः द्वन्द्वमा गयो तर पनि उसले राज्यका निकाय बलियो बनाउने र आर्थिक सुधारका कार्यलाई निरन्तरता दिई नै रह्यो। मुख्यतया जर्जियाले सार्वजनिक निकायबाट प्रदान गरिने सेवामा क्रान्तिकारी सुधार गर्‍यो।
तत्कालिन अवस्थामा भ्रष्टाचारले व्याप्त सार्वजनिक निकायलाई सुधार गर्न उक्त निकायबाट प्रदान गरिने सेवालाई निजीकरण गरियो। हरेक सार्वजनिक निकायमा सेवा प्रदान गर्ने कार्य निजी कम्पनीलाई दिइयो र सर्वसाधारणले असाध्यै छिटो र गुणात्मक सेवा पाउन थाले। यस्तो कार्यले लगानीकर्तालाई हौस्यायो। किनकि लगानीसम्बन्धी सबै सेवा छिटो तथा पारदर्शी हुन थाल्यो। यस्तो सेवामा लगानीकर्ताले ‘गैर कानुनी खर्च’ गर्नु परेन जसले गर्दा उनीहरूको व्यवसाय स्थापना तथा सञ्चालन खर्चमा व्यापक कटौती भयो।
यस्तो सुधारले सन् २००७ सम्ममा जर्जिया विश्वका तीव्र आर्थिक वृद्धि भइरहेका मुलुकमध्ये करिब १२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिसहित उदाहरणीय बन्न पुग्यो। त्यो भन्दा चाखलाग्दो कुरा त विश्व बैंकले व्यवसाय गर्न सहज हुने राष्ट्रहरूको सूचीमा एक सय बाह्रौं स्थानमा रहेको जर्जिया एक वर्षभित्र सन् २०१८ मा अठारौं स्थानमा आइपुग्न सफल भयो र सन् २०१९ मा छैटौं स्थानमा आइपुगेको छ। जर्जियाले यति छोटो समयमा यत्रो ठूलो आर्थिक फट्को मार्नुको कारण सेवा प्रदायक निकायमा आमूल परिवर्तन नै हो। यसले गर्दा सेवाग्राहीले समयमै उत्कृष्ट र गुणात्मक सेवा प्राप्त गर्नसके, जसका कारण मुलुकमा अथाह विदेशी लगानीकर्ता प्रवेश गरे, लगानी गरे।
इथियोपिया र रुवान्डा जस्ता मुलुक आज तीव्र विकासको गतिमा हिँडिसकेका छन्। दुवै मुलुकको आर्थिक समृद्धिको रहस्य पूर्वाधार विकासको निर्माण र सेवाग्राहीलाई प्रदान गरिने गुणात्मक, प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी सेवा नै हो।
वर्षौंको युद्धबाट थिल्थिलिएर छोटो समयमै समृद्धि हासिल गरेको अर्को एसियाली मुलुक भियतनामलाई हेरौं। सन् १९७५ ‍सम्म लगातार ३५ वर्षसम्म अमेरिकासँग लडाइँ लडेको भियतनामले सन् १९८६ देखि आर्थिक र सामाजिक सुधारका प्रयास सुरु गर्‍यो। राज्यले लगानीमैत्री नीतिनियम बनाएसँगै सार्वजनिक निकायबाट प्रदान गरिने सेवा छिटो र पारदर्शी बनायो।
यी र यस्तै लगानीमैत्री नीतिनियमका कारण विश्व विख्यात नाइक र सामसुङजस्ता कम्पनी भियतनाममा स्थापित भए। सन् २००७ मा विश्व बैंकको डुइङ विजनेशमा १०४ औं स्थानमा रहेको भियतनाम सन् २०१८ मा आइपुग्दा ६८ औं स्थानमा आइपुग्यो। कृषिलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर कृषिक्षेत्रमा वैज्ञानिकीकरणसँगै राज्यका नीति परिवर्तन गरिए। परिणामस्वरूप, हाल भियतनाम कृषि उत्पादन विशेष गरी धान निर्यातमा विश्वको पाँचौं, कफीमा विश्वको दोस्रो मुलुकमा पर्छ।
कृषिक्षेत्रको विकासमा भियतनामले चीनबाट सिकेको हुनुपर्छ। राष्ट्रपति देङसाओ पिङको नेतृत्वमा सन् १९७८ मा चिनियाँ चरित्रको समाजवाद निर्माण गर्ने प्रयासस्वरूप व्यापक आर्थिक सुधारका कार्य भए। उक्त प्रयास कृषि क्षेत्रको सुधारबाट सुरु भएको थियो जसअन्तर्गत कृषिमा कृषकको अधिकार स्थापित गरियो र राज्यले कृषि उत्पादन बढाउन कृषकलाई अनेकौं सहुलियत दियो।
त्यसैले चीनको आर्थिक विकासलाई तलदेखि माथि भन्ने गरिन्छ। चीनले कृषिक्षेत्रको विकाससँगै सहरीकरणमा व्यापकता ल्यायो। सहर निर्माणका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गरायो र छोटो समयमै चीनमा ठूलठूला पूर्वाधारको विकास सम्भव भयो। अर्को छिमेकी मुलुक भारतको आर्थिक सुधार लगभग हाम्रै सँगसँगै भएको हो।
सन् १९९१ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावले आर्थिक उदारीकरणको नीति ल्याउँदा हामीले पनि ३० वर्षको निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था फ्याँकेर प्रजातन्त्र स्थापना गरी नयाँ प्रजातान्त्रिक सरकार निर्माण गरेका थियौं। उक्त सरकारले सन् ०८० कै दशकदेखि सुरु भएको आर्थिक उदारीकरणलाई तीव्रता दिएको थियो। आर्थिक उदारीकरणसँगै भारतले पनि निजी लगानी र विशेषगरी विदेशी लगानी आकर्षित गर्न पूर्वाधार निर्माणमा जोड दियो। सडक, बिजुली र प्रविधिको विकासले भारतलाई छोटै समयमा एक विकाससील मुलुकमा स्थापित गरायो।
अर्को दक्षिण एसियाली मुलुक बंगलादेशको आर्थिक समृद्धिको मुख्य कारण हेर्ने हो भने राज्यले मानवस्रोतको विकासमा गरेको लगानी हो। लगभग सन् १९७५ देखि नै सुरु भएको आर्थिक सुधारका प्रयासलाई राज्यले विशेष गरी सन् १९९१ देखि तीव्रता दिएको देखिन्छ। सक्षम सीपयुक्त मानव स्रोतको विकासलाई प्राथमिकतामा राखी विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यक मानव स्रोतको विकास गर्‍यो। फलस्वरूप बंगलादेशले कपडा, जहाजका पाटपुर्जादेखि कृषिजन्य उत्पादन निर्यात गर्न सफल भयो। आज बंगलादेशको अर्थतन्त्र तीव्र वृद्धि भइरहेको छ र प्रतिव्यक्ति आय १७०० अमेरिकी डलर नाघिसकेको छ।
कुनै समयका भोकमरीको महामारीमा रुमलिएका इथियोपिया, रुवान्डा जस्ता मुलुक आज तीव्र विकासको गतिमा हिँडिसकेका छन्। दुवै मुलुकको आर्थिक समृद्धिको रहस्य भने पूर्वाधार विकासको निर्माण र सेवाग्राहीलाई प्रदान गरिने गुणात्मक, प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी सेवा नै हो। उदाहरणका लागि रुवान्डामा लगानीकर्तालाई एकद्वार सेवा प्रदान गर्ने निकाय रुवान्डा विकास बोर्डले दुई दिनभित्र विदेशी लगानीकर्तालाई भिसा प्रदान गर्ने गर्छ। त्यस्तै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन २० दिनभित्र सम्पन्न गरिन्छ। १. नेपालको समृद्धिको बाटो
समृद्धि हासिल गरिसकेका तथा समृद्धिको बाटो समाइसकेका मुलुकले समृद्धिका लागि गरेका प्रयासबाट नेपालले धेरै लाभ लिन सक्छ। सामाजिक सूचक हेर्ने हो भने कुनै पनि विकासशील मुलुकभन्दा हामी कम छैनौं। महिला तथा पिछडिएका वर्गको राज्यमा पहुँच उदाहरणीय छ। हरेक वर्ष गरिबी घट्दो रूपमा छ। लैंगिक विभेद शिशु तथा मातृ मृत्युदरमा हाम्रो सुधार अनुकरणीय छ। तर, आर्थिक समृद्धिमा भने हामी पछाडि परेका छौं। हामीले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न तथा लगानीकर्तालाई एकद्वार सेवा प्रदान गर्न सन् २०११ मा लगानी बोर्डको गठन त गर्यौं तर तत्कालिन कर्मचारीतन्त्रले बोर्डको उद्देश्य तथा प्रभावलाई उपेक्षा गर्‍यो र बोर्डले सोचेअनुसार कार्य गर्न सकेन।
तर, केही महिनादेखि आर्थिक समृद्धिका लागि केही ठोस प्रयास भइरहेका छन्। सन् २०१७ मा तिनै तहको निर्वाचनपश्चात स्थिर राजनीतिक अवस्था विद्यमान छ। दुईतिहाइको सरकार स्थापित छ। वर्तमान सरकारले निजी लगानी बढाउन विभिन्न लगानीमैत्री कानुन निर्माण गरिसकेको छ। विदेशी लगानीकर्तालाई एकद्वार सेवा प्रदान गर्न हालै ल्याइएको सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनमा एकल विन्दु सेवाको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनमा संशोधन जस्ता निजी लगानी आकर्षित गर्ने ठोस कदम चालेको छ। लगानीसम्बन्धी कैयौं ऐन निर्माणको क्रममा संसद्मा दर्ता भइसकेका छन्।
आर्थिक समृद्धिको आधार तयार भइसकेको अवस्थामा अब सार्वजनिक निकायबाट प्रदान गरिने सेवामा आमूल परिवर्तन नै आवश्यक छ। यस्तो सेवा छिटो, गुणात्मक र पारदर्शी हुनुपर्छ। यस्ता कार्यले लगानीकर्ताको व्यवसाय स्थापना तथा सञ्चालन खर्च कम हुन्छ र उसले आफ्नो लगानीमा सोचेअनुसारको मुनाफा प्राप्त गर्न सक्छ। यो कार्य हामी आजैका मितिबाट गर्न सक्छौं, जसका लागी हामी सबैमा दृढ संकल्प र राज्य व्यवसायमुखी हुनु जरुरी छ। हाम्रोमा प्रायः सबै लगानीकर्ताको गुनासो नै हाम्रा सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त गरिने सेवा झन्झटिलो र खर्चिलो भन्ने रहेको छ। सन् २०१८ सम्म विश्व बैंककै डुइङ विजनेश प्रतिवेदनमा १०५ औं स्थानमा रहेको नेपाल २०१९ मा अझ तल झरेर ११० औं स्थानमा पुगेको छ। यसको मुख्य कारणमा हाम्रा सार्वजनिक निकायबाट प्रदान गरिने सेवालाई औंल्याइएको छ।
यसका अलावा राज्यले कृषि, सडक, हवाई,जलविद्युत्, पर्यटन जस्ता कम्तिमा १० वटा ठूला परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर अबको पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढ्ने हो भने हामी मध्यम आय मुलुकमा सन् २०३० सम्म सजिलै पुग्न सक्छौं।- घनश्याम ओझा/अन्नपुर्णपोस्ट
35 पटक हेरिएको
समृद्ध नेपालको सूत्र